Ebumnuche 6 kpatara irughari na ụmụaka | Akụkọ Njem
Ebumnuche isii kpatara iji soro ụmụaka bulie ije
Maria | | Cruceros, Getaways, Iso umuaka eme njem
Cruises bụ a ezumike nhọrọ dị ka ọ bụla ọzọ. Agbanyeghị, maka ọtụtụ mmadụ njem njem n'oké osimiri bụ otu ihe okomoko mana n'oge na-adịbeghị anya, ụdị a agbanweela nke ukwuu. N'inwe otutu oge ezumike na ohere ị ga-eleta ọtụtụ ebe n'otu oge n'ụgbọ mmiri jupụtara n'ihe eji enyere ndụ aka, ọtụtụ ndị njem na-akwụsị ịhụ ụgbọ mmiri dị ka ihe dị oke oke ọnụ na-erughị na ọbụnadị na-anwa ịme njem ezinụlọ a.
Ka emechara, njem ụgbọ mmiri akwụsịbeghị n’oge nsogbu a. N'ime afọ asatọ gara aga, o toro site na 49% dịka data CLIA si dị, nke na-egosi na ọ bụ onyinye na-eto eto na nke mara mma karị. N’ụzọ dị otú a, ụgbọ mmiri na-ahazi ihe omume maka afọ niile ka ndị njem niile nwee obi ụtọ na ụgbọ. Childrenmụaka, ndị nwere ike ịnwe ọ timeụ n'ogige ntụrụndụ mmiri nwere nnukwu ihe nkiri, na-aga mmemme ụmụaka ma na-emere ha naanị ihe omume.
Na 2015 enwere nde mmadụ 8,44 ndị banyere njem n'otu ọdụ ụgbọ mmiri 46 Spanish (3% karịa na 2014) ọ bụ ezie na Mịnịstrị nke Ọha na-atụ anya na ọnụ ọgụgụ a ga-akarị na 2016. you ga-abụ ezinụlọ gị na gị ọ bụla n'ime ha? Ndị a bụ ọtụtụ ihe kpatara ị ga - eji ga - ebugharị na obere ụlọ ọrụ.
1 Ahụmahụ pụrụ iche
2 Kwa ụbọchị na ebe ọhụrụ
3 Ka e buuru ibu na umuaka
4 Ga-eriju afọ
5 Nnwere onwe maka ndị nne na nna na ihe ọchị maka ụmụaka
6 Domụaka anaghị akwụ ụgwọ
Ahụmahụ pụrụ iche
O yikarịrị ka ụmụaka amaghị ụgbọ ịnyịnya dị ka ọ dị n'ụgbọ bọs ma ọ bụ ụgbọ elu. Ga mba dị iche iche mgbe ị na-eme njem n'ụgbọ mmiri bụ ahụmịhe pụrụ iche ebe ha ga-enwe ike ịtụgharị uche n'oké osimiri na ịma mma ya na ịdị ukwuu ya, mara ihe ndụ dị n'ụgbọ mmiri ma bie njem pụrụ iche nke ha ga-echeta ndụ ha niile.
Kwa ụbọchị na ebe ọhụrụ
Travelgagharị n'ụgbọ mmiri bụ ihe efu. Ọ gaghị ekwe omume ụmụaka ga-agwụ ike na-atụle ihe niile ha nwere ike ime ebe ahụ na ndị na-eme egwuregwu na ụmụaka ndị ọgbọ ha. Njem n’etiti ọdụ ụgbọ mmiri agaghị abụrịrị ha ihe na-agwụ ike, yabụ na ha agaghị ajụ nkebi ahịrịokwu a nke “kedu mgbe anyị ga-abịa?” Oge niile. Kama nke ahụ, oge ha ga-agafe.
Na mgbakwunye, ịnyagharị ga-enyere ha aka ịmara ọtụtụ obodo n'ọtụtụ mba ma were njem na-atọ ọchị. Ha ga-achọpụta ebe dị egwu nke ga-adọta ọtụtụ elebara anya, ịbụ ụbọchị dị iche iche kwa ụbọchị.
Abia n’okporo onodu n’uzo di iche iche nke irughari enwere uzo abuo. Nke mbụ bụ ịkwadebe ha n'onwe anyị na nke abụọ bụ iji njem ndị ụgbọ mmiri na-ahazi. N'okwu nke ikpeazụ, ị ga-edebe ha ma ọ bụ na ntanetị ma ọ bụ mgbe ị bịarutere n'ụgbọ mmiri.
Ka e buuru ibu na umuaka
Withgagharị na ụmụaka nwere ike bụrụ nsogbu mgbe ụfọdụ mgbe emebere njem njem gaa ebe dị iche iche ebe ị ga-ebu igbe, ihe egwuregwu na trolleys n’echefughị ​​ụmụntakịrị.
Na njem ụgbọ mmiri, ihe niile dị mfe ka enyochala akpa ahụ n'ọdụ ụgbọ mmiri na ndị ọrụ ahụ na-ahụ maka ikesa ya site na ụlọ. Mgbe ahụ n’ebe ọ bụla ụgbọ mmiri kwụsịrị, o zuru ezu iji weta ihe ndị dị mkpa iji mee nleta.
Nri umuaka n’oge njem bu ihe ndi nne na nna n’eme. O siri ike ikpokọta nri dịgasị iche iche ma sie ike mgbe a na-amaghị ụlọ nri ndị dị n'obodo, ike gwụrụ ụmụaka ịkwaga ebe a gaa ebe ahụ nke ukwuu ma ọ bụ na ha anaghị enye akụrụngwa mgbe ha na-ahọrọ efere na menu.
Na njem ụgbọ mmiri, nsogbu ndị a nwere azịza dị mfe ebe enwere ebe a na-eri nri ebe ị nwere ike ịchọta ihe niile ị nwere ike iche n'echiche. Na mgbakwunye, ha nwere ụlọ oriri na ọ servingụ servingụ na-eje ozi Asia, Italian, American ma ọ bụ gourmet nri nke mezue onyinye ahụ iji mejuo ụtọ ezinụlọ niile.
Nnwere onwe maka ndị nne na nna na ihe ọchị maka ụmụaka
Ọtụtụ njem ụgbọ mmiri nwere ụmụaka n'akụkụ ebe ndị ọrụ ruru eru na-elekọta ụmụaka mgbe niile ka ha wee nwee ike ịnabata onwe ha na gburugburu nchekwa maka udo nke uche na nnwere onwe maka ndị nne na nna. Na mgbakwunye, mgbe ha banyere n'ụgbọ, ha ga-enweta wristband wristband na ndị nne na nna nwere ike ịgbazite ngwaọrụ pager ma ọ bụ ekwentị DECT maka obere ụgwọ ọzọ ka ị wee nwee ike ịkpọtụrụ gị oge niile.
N'ụzọ dị otú a, ụmụaka nwere ike inwe ndụ mmekọrịta nke ha. Mee enyi ọhụrụ na gburugburu ebe nchekwa ma nwee ezumike nke anaghị echefu echefu. Maka akụkụ ya, Ndị okenye ga-enwekwa ike ịnụ ụtọ oge pụrụ iche n’onwe ha, nwee udo nke ịmara na ụmụ ha nọ na gburugburu nchekwa ma nwee ezigbo oge.
Domụaka anaghị akwụ ụgwọ
N’ọtụtụ njem ụgbọ mmiri, ụmụaka niile ndị ha na ndị mụrụ ha na-eketa otu ụlọ n’efu. Nke pụtara ịchekwa tuo na ezumike. Ya mere, onye ọ bụla nwere ike ịnụ ụtọ njem maka obere ego, na-enweghị nrụgide ma chọpụta ebe ndị kachasị mma na mbara ala site n'oké osimiri.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways » Iso umuaka eme njem » Ebumnuche isii kpatara iji soro ụmụaka bulie ije
Ebe na-anọ a egwu Halloween